❤️ Comment Télécharger Des Vidéos Instagram Sur Votre Iphone : Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa Instagram - Facebook
Maitiro ekurodha Instagram Vhidhiyo kune Yako iPhone : Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa Instagram
Kana zvasvika pakutumira mavhidhiyo pa Instagram, une dzimwe sarudzo. Iwe unogona kutsigira pfungwa yako nekushandisa imwe chete pfuti mafirimu kana nyaya pfupi.. Kunze kwezvo, unogona kushandisa kutevedzana kubva kumaakaundi akashandiswazve. Pane nzira dzakawanda dzekurodha Instagram vhidhiyo kune yako nharembozha.
Instagram vhidhiyo zvinyorwa zvinogona kutorwa uye kuchengetwa zvakananga kubva pasocial media platform. Instagram's matatu dot sarudzo haichawanikwi kuchengetedza mavhidhiyo kuraibhurari yako yemifananidzo. Mutore mufananidzo, irekodhe sevhidhiyo kana kuichengeta uchishandisa yechitatu-bato software kuitsigira.
Unogona kudhawunirodha Instagram mavhidhiyo nemifananidzo kana uine iPhone kana iPad, asi kwete neimwe nzira. Instagram mifananidzo nemavhidhiyo anogona kuchengetwa nenzira nhatu dzakasiyana pa iPhone yako, zvese izvo zvinoshandisa iOS inoshanda sisitimu.
Pasinei nokuganhurirwa uku, unogona kushandisa iPhone yako kuona Instagram mavhidhiyo uye mifananidzo. Kuwedzera mune ino post, Ini ndichadzidza zvakawanda nezve nzira dzakasiyana dzekuchengeta Instagram mavhidhiyo uye mafoto pa iPhone yako.
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako.. Kutenda kune Instagram Downloader, Sevha Instagram Vhidhiyo uye Mapikicha kune yako Smartphone kana Kombuta.
Iyo inokurumidza uye iri nyore nzira yekuchengetedza Instagram mafoto ndeye kushandisa Instagram foto kudhawunirodha. Kutenda kune akawanda maapplication aripo paApp Store, hazvina kumbobvira zvave nyore kuchengetedza Instagram mafoto nemavhidhiyo pafoni yako. Kurodha Instagram mafoto nemavhidhiyo pafoni yako zviri nyore. Kunze kwezvo, kushandiswa kwevakawanda vavo kwakasununguka zvachose. Kunze kwezvo, mazhinji eaya maapplication ane mu-app kutenga, kushambadzira kwakanyanya uye intuitive mushandisi ruzivo.
Iwe hausi wega kana iwe usingazive nzira yekurodha Instagram zvemukati. Zvitende kana usazvitenda, Tiripo kuti tikubatsirei. Iwo akanakisa Instagram vhidhiyo uye mafoto ekurodha akanyorwa pazasi.
\_Téléchargez des images et des vidéos Instagram pour les retweeter. Repost yakakurumbira Instagram foto uye vhidhiyo uploader app inoita kuti zvive nyore kugovera mifananidzo nemavhidhiyo. Nekuda kweiyo mushandisi-inoshamwaridzika dhizaini yeapp, wese anoishandisa anofarira kusefa.
Instant backup, inowanzotaurwa nezvayo nekushanda kwezita rimwe chete, inokutendera iwe kuchengetedza Instagram mafoto uye mavhidhiyo zvakananga kufoni yako gallery pasina kuvhura iyo app. Kuisa mufananidzo kana vhidhiyo, ingoteedzera uye unama iyo URL muapp's URL bar.
FastSave yakakurumbira Instagram kuchengetedza app inoshanda pane ese nharembozha uye desktops. Kunyangwe kana foni yemushandisi isina kubatana neInternet, anenge achiri kukwanisa kuona uye kudhawunirodha Instagram mafoto.
Saver Reposter inorerutsa maitiro ekuchengetedza uye kutumirazve Instagram mafoto. Usati wagona kugovera mafoto ako nemavhidhiyo nevamwe, unofanira kutanga waachengeta mukamera yemudziyo wako.
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako.. Iyo Shortcuts App inokutendera iwe kuti utore mafoto kubva ku Instagram
Mapfupi anotendera kuti uchengetedze Instagram mafoto nemavhidhiyo pane yako smartphone uye uwane iwo gare gare uchishandisa maShortcuts app. Munyika yakanaka, pangadai pasina imwe sarudzo kunze kwekushandisa nyanzvi software.
Ingo tevera iyo onscreen mirairo yekuisa iyo Instagram yekurodha mapfupi pane yako iPhone.
i. Kuti uwane iyo menyu mushure mekutora foto kana kurekodha vhidhiyo, dzvanya chiratidzo ” … ” mukona yepamusoro yekurudyi yemufananidzo kana vhidhiyo. Ensuite, unogona kusarudza pekuchichengeta.
ii. Instagram download mapfupi anogona kuwanikwa pazasi peprofile yako, pazasi penzvimbo yekugovana sarudzo.
iii. Paunoshandisa nzira yekudimbudzira kekutanga, iwe unozokumbirwa kubvumidza kupinda kune ese ari maviri internet uye yako yekuunganidza mifananidzo. Usambofa wakaisa kuchengeteka kwako panjodzi nekutadza kutarisa zvese usati wazvipira. Kana iyo foto kana vhidhiyo yapera, inochengetwa semufananidzo wedhijitari mune yemifananidzo gallery pane yako iPhone's yekuchengetedza mudziyo.
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako.. Iwe Unogona Kuwana Zvirinyore Instagram Zvemukati Kubva Mukati meApp Uchishandisa Jailbreak Mods.
Cydia ichitoro chakaputsika iPhone app chinokutendera kuti uchengetedze Instagram mafoto nemavhidhiyo usingade kushandisa iyo Instagram app.. Pakati pemazhinji mamwe mhinduro anowanikwa, unogona kushandisa Instagram ++ kana InstaTools.
Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa InstagramSei Ndirikurasikirwa nevateveri ve Instagram : Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa Instagram
Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa InstagramTsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa Instagram : Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa Instagram